Indawo yokuhlala eyi-53 m2 emnyango weSanzy Natural Park - I-Airbnb
Indawo yokuhlala eyi-53 m2 emnyango weSanzy Natural Park
Igumbi lakho lokulala e iflethi eqeshisayo sinombuki zindwendwe onguCédric
Indawo esembindini weOullins, ekwikhilomitha eziyi-4 ukusuka embindini weLyon, uza konwabela ukuhlala kwakho ixesha elifutshane okanye elide, iflethi, kumgangatho wokuqala, we-53 m2 kunye nebhalkhoni yayo ye-3 m2 ejonge ipaki. Iqaqambe, ithule, uza kuzixabisa iinkonzo zayo.
Le yindawo yokuhlala ethe cwaka enamagumbi okulala amabini kwindawo yokuhlala, igumbi lokulala elinye elihlala umqeshi unyaka wonke.
I-PLUS : Indawo yokupaka esimahla.
Indawo yam isendaweni yokungena eSanzy Natural Park, eyinxalenye yegadi engapheliyo eOullins.
Igadi engapheliyo luhambo lweeyure eziyi-2,5 kubantu abahamba ngeenyawo. Ukwenza nosapho okanye abahlobo !
Ikuvumela ukuba udibanise iipaki ezine ezinkulu zesixeko (iChabrières, iYzeron, iSanzy nePrado) ngendlela "ethambileyo" yokunxibelelana. Ibonwe ngokucacileyo esixekweni, le ndlela inezinto zolonwabo, zokuhamba ngeenyawo nokufumanisa.
Ngenxa yokuba ngaphaya kobumnandi bokuhamba-hamba kwindalo kunye nembali yesixeko, uza kuba nethuba lokubona imbali ye-Oullins kunye neendawo zikawonke-wonke nezangasese okanye izakhiwo ezakhiwe ngendlela emangalisayo. Ngapha koko, phantse ziindawo eziyi-60 zemvelo okanye zelifa lemveli ezibonisa utyelelo lwakho.
Igadi engapheliyo yenziwa :
indlela ephakathi yeekhilomitha eziyi-9, edibanisa iipaki ezine ezinkulu zesixeko,
kunye neengubo ezine ezongezelelekileyo (iCadière, iBussière, iClavelière kunye neSarra) ukusuka kwi-1,3 ukuya kwi-2.6 km.
Le yipaki efanelekileyo yabahambi ngeenyawo nababaleki! Iihektare eziyi-4 eziluhlaza zikuvumela ukuba uphefumle ngenxa yeendlela.
Le paki inezi zinto: iitafile zepikiniki, imidlalo yabantwana, iibhentshi endleleni, iigadi zentsapho.
4.54 out of 5 stars from 104 reviews
4.54 · Izimvo eziyi-104
Indawo yokuhlala yosapho
Umbuki zindwendwe ngu- Cédric
Ndibulisa iindwendwe ndize ndibuze ukuba zinemibuzo okanye izinto ezikuxhalabisayo.
Ndizenza ndifumaneke efowunini.
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Oullins